असहाय कोटाको चरम दुरुपयोग : नेताका छोराछोरीलाई नि:शुल्क शिक्षा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । अभिभावकविहीन, असहाय र टुहुरा बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहेको नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) ले यस्ता बच्चाहरूको छात्रवृत्ति कोटाको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । पहुँचका आधारमा उक्त कोटा दुरुपयोग गर्दै कांग्रेस नेता एवं काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र १० बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद पुकार महर्जनले आफ्नी छोरीलाई नि:शुल्क पढाइरहेका छन् ।
बाल संगठनको मुख्य कार्यालय रहेको नक्सालको १४ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा भाडामा लिएबापत बृहस्पति शिक्षा सदनले संगठनका २० विद्यार्थी नि:शुल्क पढाइदिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । संगठनले २०५८ जेठ ८ मा ३० वर्षका लागि वार्षिक ३० लाख रुपैयाँमा विद्यालयलाई जग्गा भाडामा दिएको थियो । बाल संगठनले असहाय, टुहुरा र अभिभावकविहीन बालबालिकाका नाममा छुट्याइएको नि:शुल्क छात्रवृत्ति कोटामा नेताका छोराछोरी पढाइरहेको छ
संगठन र विद्यालयबीच भएको सम्झौताको १२.५ नम्बर बुँदामा जग्गा भाडामा दिएबापत संगठनको सिफारिसका आधारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अनाथ, असहाय वा सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकालाई डे बोर्डर्स छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यस्तो छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीको बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा, कापी, किताब, कलम, विद्यालय पोसाक र अन्य शैक्षिक सामग्री नि:शुल्क पाउँछन् । विद्यालयका अनुसार १ देखि १० कक्षासम्मको छात्रवृत्तिबापत विद्यालयको औसतमा ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
सांसद महर्जनकी श्रीमती रमा व्यञ्जनकार संगठनको प्रशासन शाखामा निमित्त प्रमुखका रूपमा कार्यरत छिन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं १० को कांग्रेस क्षेत्रीय सभापतिसमेत रहेको महर्जनकी कान्छी छोरीले कक्षा १ देखि नै बृहस्पतिमा छात्रवृत्ति कोटामा पढदै आएकी छन् । उनकी जेठी छोरीले समेत यही कोटामा बृहस्पतिबाटै एसईई दिइसकेकी छन् ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सांसद महर्जनले राजनीतिमा लाग्दा आफ्नो आम्दानीको स्रोत कमजोर भएको, घर चलाउनै गाह्रो भएकाले संगठन प्रमुख रीतासिंह वैद्यसँग अनुनय गरेर छोरीलाई छात्रवृत्ति मिलाएको बताए । असहाय बच्चाको कोटा खोस्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘दिदी (अध्यक्ष रीता सिंह) लाई भनेपछि उहाँले फ्री गराइदिनुभएको हो ।’
संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले भने आफूहरूकहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र बच्चा पढाउन नसक्ने थुप्रैको निवेदन आउने गरेको र त्यसलाई हेरेर छात्रवृत्ति दिइएको दाबी गरे । अभिभावकविहीन बच्चाको कोटामा नेताका छोराछोरीलाई किन छात्रवृत्ति दिएको भन्ने प्रश्नमा उनले आयस्रोत नभएका केही नेताका छोराछोरी पढाएको स्वीकार गरे । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टीका नेताका छोराछोरी पढाएको दाबीसमेत उनले गरे ।
उनले कुन–कुन नेताका छोराछोरीलाई यो कोटामा छात्रवृत्ति दिइएको भन्ने खुलाउन चाहेनन् । उनले यति मात्रै भने, ‘नेता हुँदैमा हुन्छ ? राजनीतिमा लाग्दालाग्दै छोराछोरी पढाउन नसक्ने भएकालाई हेरेका हौं ।’ उनले दुई/तीन जना नेताका छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले बोर्डबाटै सल्लाह गरेर संगठनमा कार्यरत केही कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति दिएका छौं ।’
सन् १९६४ मा तत्कालीन राजपरिवारले सञ्चालनमा ल्याएको बाल मन्दिरले आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा अनाथ, परित्यक्त, द्वन्द्वपीडित बालबालिका, कैदीबन्दीका छोराछोरीको बालअधिकारको रक्षा गर्ने, पालनपोषण गर्ने, शिक्षामा सहयोग गर्ने र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका बच्चालाई शिक्षामा सहयोग गर्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
राष्ट्रकवि घिमिरेको स्वास्थ्य अबस्थामा सुधार
काठमाडाैँ । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मेदान्त […]
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई बर्खास्तीको माग गर्दै अनसनमा बसेको डा.गोबिन्द केसीले फेरि पनि […]
१० वर्ष कान्छासँग प्रितीको विहे !
एजेन्सी, बलिउड नायिका प्रिती जिन्टाले आफूभन्दा १० वर्ष कान्छा प्रेमीसँग विवाह गर्ने भएकी छन् । ४१ वर्षे […]
कात्तिक २ । काठमाडौँ, ‘नयाँ संविधान कहिले संशोधन हुन्छ ? १० या १५ दिनभित्रमा ?’ उपप्रधान तथा […]
एमालेले देशलाई टुक्रयाउन दिदैन–नेता गौतम
पोखरा । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधानको एउटै धारा पनि परिवर्तन र प्रदेशको एक ईन्च जमिन पनि […]
आमाको मुख हेर्ने औंसी आज
काठमाडौं, १३ वैशाख–नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिने आमालाई सम्मान गर्न वैशाख कृष्णऔँसीका दिन आज आमाको […]